UMazibuko ukhala ngamalungu e-ANC | Isolezwe
UMazibuko ukhala ngamalungu e-ANC
Isolezwe / 6 August 2012, 11:47am /
260911 DA Spokesperson Lindiwe Mazibuko. 070411. Picture: Bongiwe Mchunu
IDEMOCRATIC Alliance ithi yize izibona isethubeni lokuba yiqembu eliphikisa ngokugcwele KwaZulu-Natal kodwa isabhekene nenkinga yokuhlaselwa ngamalungu kaKhongolose uma ikhankasa ezindaweni zabantu abamnyama, ikakhulukazi ezisemakhaya.
Lokhu kuvezwe ngumholi wale nhlangano ePhalamende uNksz Lindiwe Mazibuko (osesithombeni) obekhuluma eKokstad, lapho ebehlangene khona nabantu bakuleya ndawo ukuyoqhuba umkhankaso wabo wemigomo yabo yemisebenzi.
Le migomo i-DA ithemba ukuthi izosiza kuleli uma izakhamizi zibanika ithuba lokuphatha uhulumeni njengeqembu elibusayo.
UNksz Mazibuko uthe kumanje banezinhlelo zokuthi baqinisekise ukuthi wonke amawadi aKwaZulu-Natal babanamagatsha kuwo ungakafiki u-2014 kanti ukuntenga kwe-IFP kwezombusazwe bakubona kuzobanika ithuba lokuba yiqembu eliphikisayo kulesi sifundazwe.
“I-KZN kuseyisona sifundazwe esiseyinkinga kithina ngenxa yayo i-ANC ngoba uma sifika ezindaweni eziningi zakhona sisuke singenawo amaphoyisa sihamba sodwa nokwenza abantu bayo bathole ithuba lokusijikijela ngamatshe, basihlasele. Lokhu akusethusi ngoba noNobhala-Jikelele weNyunyana edlelana ne-ANC iNumsa uMnuz Irvin Jim uke watshela abantu eThekwini ngoMeyi ukuthi kumele bangayivumeli i-DA ingene ezindaweni zabamnyama nasemalokishini okuyinto engeke isivimbe ngoba akukho muntu ozositshela ukuthi kumele sikhankase sigcine kuphi,” kusho uNksz Mazibuko.
Uthe yize besatshiswa kodwa akukho okuzobavimba ukuhambela izindawo zabamnyama ngoba lokhu okwenziwa yi-ANC kubuyisela izwe emuva lapho abantu babephoqwa ukuthi kumele bahambisane nayiphi inhlangano.
Eqhuba uthe ukunqoba kwabo ukhetho lokuchibiyela obelungesonto eledlule eVryheid kuyizimpawu ezikhombisayo ukuthi abantu abaningi sebenalo ithemba nge-DA.
Lo mbuthano we-DA ubusendaweni kaKhongolose eMount Curries Street, kanti iningi labantu ebeliyingxenye yawo bekuyintsha nedlanzana labantu abadala.
UNksz Mazibuko ubuye wahambela indawo ebizwa ngeHorse shoe lapho umphakathi wakhona ukhala ngokungalungiswa kwezindlu zangasese eziqhume amapayipi namanzi ayazigelezela emgwaqweni.
Le ndawo isuse umsindo ngenyanga edlule ngesikhathi amakhansela ekhala ngokuthi umasipala waseSisonke wathi akanayo imali yokuyilungisa kodwa kuthe kungakapheli ngisho isonto wakhipha imali engu-R1.5million ukuyoxhasa umcimbi we-jazz owawusingethwe ngumasipala wesifunda Ugu.
I-DA iphinde yasola i-ANC ngokuthi icishe ifane ne-National Party ngoba sekube nezikhathi eziningi ivimba izinto ezizosiza umphakathi.